अधिकारको नाममा अतिवादउन्मुख समाज - Jagaran Post
जागरणपोस्ट ७ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १२:५२
यति मीठो तरिकाले छायांकन गरिएको यो सानो भिडियो क्लिप देखेर कतिपय अधिकारकर्मीको टाऊको दुखेछ । मदनकृष्ण श्रेष्ठ र मिथिला शर्मा अभिनित यो फुलबुट्टे सारी बोलको भिडियोमा कतिपय अधिकारकर्मी भनाऊँदाहरुको टाऊको दुख्नुपर्ने स्थान त म कतै देख्दिन ।
श्रीमान-श्रीमतीबिचको आत्मियता, प्रेम, स्निघ्नता, सद्भाव, एकअर्काको सम्मानजस्तो बिषयलाई महिला अधिकारसंग जोडेर हेर्नू पनि अति नै हो ।
ठिकै छ, मिथिलाले चिया बनाईन । कोट लगाईदिईन। मदनकृष्णले चिया बनाएनन, सारी लगाईदिएनन, झरी पर्यो, छाता लिएर गईन, रुघा लाग्दा तातोपानीको ब्यवस्था गरिदिईन भिडियोमा ।
श्रीमान श्रीमतीबिचको सम्बन्धलाई यति मिठो र लवजपूर्ण तरिकाले छायांकन गरिएको यस भिडियो क्लिपमाथी पनि कथित अधिकारकर्मीहरुले महिला समानताको बिरुद्धमा देख्नु दृष्टिदोष हो । अतिचार हो । लाटा देशका गाँडा तन्नेरी भनेझैं हो ।
हामीले पूर्वीय सभ्यतालाई अनुसरण गर्दै आइरहेका छौं, पाश्चात्य सभ्यता होईन। हामीलाई अधिकार र जिवनशैली चाहिएको छ पाश्चात्य शैलीको । अधिकार र स्वतन्त्रताको नै कुरा गर्ने हो भने नेपालको संविधानले के महिलामाथी विभेद गरेको छ र ? गरेको छ भने कहाँ गरेको छ? महिलाको स्वतन्त्रतामाथी बन्देज लगाएको छ र ? छ भने कहांनेर लगाएको छ ? कथित अधिकारकर्मीहरुलाई प्रश्न छ ।
सविधानले दिएको अधिकार र स्वतन्त्रता हामीले कार्वान्यनमा ल्याऊन पो सकेनौं कि ? प्रयोग गर्न पो जानेनौं कि ? या, स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने नाममा हामिजस्ता कथित टाठाबाठा पनि चिप्लियौं कि ? या दूरदराजसम्म अधिकार र स्वतन्त्रताको बारेमा सूसूसूचित नगरि तारे होटल र रिसोर्टहरुका सेमिनारसम्म मैं सिमित गर्नाले अधिकार र स्वतन्त्रताको उपभोग र महसुस गर्न नसकिएको पो हो कि ?
अर्को कुरा, अधिकार अनि स्वतन्त्रताको उपभोग र महसुस गर्दैगर्दा हामीमा के हाम्रो कर्तव्य र दायित्त्व च्यूत र क्षीण हुँदै गएको हो त ? अधिकारको नाममा सबै कुरा पाश्चात्य शैली नै ठिक भन्नेकुरा अतिचार हैन र ? के हाम्रो पूर्वीय सभ्यता खोटैखोटयुक्त हो ? पाश्चात्य सभ्यता हरेक स्वतन्त्रताको कडि हो ? हरेक समस्याको छुमन्तरिय जादू हो ?
हामी जन्मेदेखि मृत्युपश्चात् सम्म पनि पूर्वीय सभ्यता, मूल्यमान्यता, आदर्श, जिवनशैली अंगाल्दै सम्पूर्ण जिवनशैली ब्यतित गर्दछौं भने हामीलाई पाश्चात्य शैलीप्रति यतिविघ्न मोह किन ?
श्रीमान श्रीमतीविचको स्नेहमा जसो पनि जायज मानिन्छ, यी ब्याक्तिगत कुरा हुन। यो कुरा पूर्वीय सभ्यतामा होस या पाश्चात्य सभ्यतामा । पाश्चात्य सभ्यतामा पनि सबै श्रीमानहरुले चिया बनाएर श्रीमतीलाई दिएका छैनन । सबै श्रीमानहरुले आफ्नो कोट आफै लगाईदिएका पनि छैनन र सबै श्रीमतीहरु झरिको बेला बार्दलीमा बसेर अधिकार, कर्तव्य र स्वतन्त्रताको नाममा तमासा हेरेर बसेका हुँदैनन् । समय हुंदा एकले अर्कोलाई जतिबेला पनि जुनसुकै परिस्थितिमा पनि साथ सहयोग, स्नेह र जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन् ।
हामीलाई सबैकुरा अमेरिकाकै चाहिने भए नेपाल नै किन चाहियो र ? देशको नाम नै मिनि अमेरिका राखौं। नेपाली भाषा खारेज गरौं, नेपाली मौलिकता खारेज गरौं । नेपाल नै खारेज गरौं र मिनि अमेरिकन बन्दै हिंडौं । पर्वोत्सव र संस्कृतिहरु सबै खारेज गरौं । जिवनशैली खारेज गरौं । अधिकार र स्वतन्त्रताको नाममा सबैथोक खारेज गरौं । अनि अनुहारमा सेतो पाऊडर धसेर मिनि अमेरिकन हौं भन्दै हिंडौं ।
नेपालमा हरेक कुरामा अतिचार गरे नै ठूलो होईन्छ भन्ने मानशिकता त्यागौं। म मात्रै जान्ने र ममात्रै ठूलो भन्ने मानशिकता पनि त्यागौं । हरेक कुरालाई दृष्टिदोषको नजरले पनि नहेरौं । संविधानले दिएको अधिकार र स्वतन्त्रताको माध्यम जहाँ अँध्यारो छ त्यहाँ दियो बाल्ने काम गरे बरु बल्ल समयसापेक्ष बदलाव आऊँथ्यो कि ?